အာဏာသိမ်းပြီး ရက် ၉၀ နီးပါးကြာလာတဲ့အချိန် နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ အခင်းအကျင်း ဟာ ပိုပြီးရုပ်လုံးပေါ်လာပါပြီ - ခေတ်သစ်နတ်ခ်
admin | April 28, 2021 | knowledge | No Comments
အာဏာသိမ်းပြီး ရက် ၉၀ နီးပါးကြာလာတဲ့အချိန် နွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့ အခင်းအကျင်း ဟာ ပိုပြီးရုပ်လုံးပေါ်လာပါပြီ။
ဘဏ်၊ ကျောင်း၊ ဆေးရုံ၊ ဈေး တွေကို ပုံမှန်အတိုင်း ဘာကြောင့် လည်ပတ်စေချင်တာလဲဆိုတော့ အုပ်ချုပ်လို့မရအောင် ငြင်းဆန်နေတဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အား ကို လုံးဝ ပြိုလဲသွားစေချင်လို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန်မလည်ပတ်နိုင်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိနေတာကကို မြို့ပြတော်လှန်ရေးရဲ့အရှိန်ကို ထိန်းထားပေးပါတယ်။ အခုအချိန်ထိ SAC ရဲ့တပ်တွေဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ် EAO တွေထဲကို တပ်မကျွံရေး အဓိက ထားနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ကချင်မှာ KIA ဟာ အလောဘမ်ကို သိမ်းပြီး တောက်လျှောက် တိုက်နေတာ၊ KNU တပ်မဟာ ၅ နဲ့ ထိတွေ့မှု ပြင်းထန်လာတာ တွေကို လေကြောင်းနဲ့သာ နေ့စဥ် ဖိတိုက်နေပေမယ့် မြေပြင် ကြည်းတပ် အင်အား အများကြီး မသုံးသေးဘဲ ထိန်းနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ တပ်ကျွံရင် နှုတ်ရခက်လို့ပါ၊ ရန်ကုန် ကို အကြမ်းဖက်ဖို့ပို့ခဲ့တဲ့ တပ်မ ၇၇ ကို ပဲခူးကို ဖြိုခွင်းတဲ့ ညမှာ အင်အားအများစု ပြန်ရုတ်သွားခဲ့ပြီး အခု ကချင် ကို ပို့လိုက်ပြီလို့ KIA က ပြောထားပါတယ်။ အကျိုးဆက်က ပြောက်ကျား သပိတ်တွေ၊ သပိတ်စစ်ကြောင်း တွေ နေရာအနှံ့ ထွက်ပေါ်နေတာ၊ ပြန်ထွက်ပေါ်လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် EAO တွေကိုဖိရင် မြို့ပြသပိတ်တွေ ပြန်ကြွလာပြီး၊ မြို့ပြသပိတ်တွေကို ပြန်ဖိရင် EAO တွေ ဘက်မှာ အင်အားမသုံးနိုင်တော့ ပြန်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လေကြောင်းနဲ့သာ တိုက်နေပြီး မြေပြင်ကို အင်အားမသုံးသေးတာပါ။ SAC အနေနဲ့ အကြောက်ဆုံးဟာ EAO တွေ ပေါင်းစည်းမိသွားမှာကိုပါ။ သမိုင်းတောက်လျှောက်မှာလည်း EAO တစ်ဖွဲ့ချင်းစီနဲ့ သာ တိုက်ခဲ့ပြီး၊ EAO အကုန်နဲ့ တိုက်တဲ့ အတွေ့အကြုံ မရှိပါဘူး။ အခုတော့ NCA ထိုးထားတဲ့ EAO တွေရဲ့ PPST ကနေ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် တပ်ပေါင်းစု Federal Alliance ဖွဲ့ဖို့ ဒီနေ့ စပြီး ပြောလိုက်ပါပြီ။
Federal Alliance သာ ဖြစ်လာပြီဆို SAC ဟာ နေရာအနှံ့စစ်မျက်နှာဖွင့်ရတော့မှာပါ။ သူတို့ အဓိက ရင်ဆိုင်ရမယ့် ပြဿနာ က တပ်တွေဟာ အရမ်းပမ်းလာမယ့် ပြဿနာပါ။ အခု ၇၇ ဆိုရင် ရှေ့တန်း ကနေ ရန်ကုန်၊ ရန်ကုန်ကနေ ပဲခူး၊ ပဲခူးကနေ ကချင် ဖြစ်နေပါပြီ။ စစ်တိုက်တာဟာ အသက်နဲ့ရင်းရတာပါ၊ ဘာကြောင့် ငါတို့ စစ်တိုက်ရတာလဲ? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ နောက်လအနည်းငယ်မှာ အကြီးအကျယ် စကားပြောလာတော့မှာပါ။ Federal Alliance နဲ့ တိုက်တဲ့အခါ စစ်မျက်နှာအရမ်းများလာရင် ရှိသမျှ အကုန်တိုက်မလား? အချို့ပြည်နယ်တွေ လက်လွှတ်မလား? ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ လွတ်မြောက် Federal State တစ်ခု စရသွားပြီဆိုရင် တပ် CDM, တပ်ကနေ Federal Alliance ကိုပေါင်း ဆိုတာတွေဟာ မကြာခင် အလုံးအရင်း ဖြစ်လာတော့မှာပါ။ အဲဒါဆို မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲ၊ Federal Army စတာတွေက ဆက်တိုက်လိုက်ပါလာတော့မှာပါ။
အခုအနေအထားမှာတင် KIA နဲ့တိုက်ဖို့ ကချင်ဘက်ကို တပ်ကျွံမခံရဲဘဲ အပ်ကွက်မိနေတဲ့ အနေအထားပါ။ Myanmar Now မှာ ပါလာပြီဖြစ်တဲ့ Federal Alliance အကြောင်းဟာ EAO တွေရဲ့ အင်မတန်ကြီးမားတဲ့ အရွေ့ပါ။ ​နွေဦးတော်လှန်ရေးဟာ အရှိန်အဟုန် ပိုကြီးလာပါပြီ။ အရေးတော်ပုံ ဟာ တကယ်အောင်မှာပါ။